CENI : Voafidy ho filoha vaovao Dama Andrianarisedo Retaf Arsène – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:45
Nitondra fanazavana ny Filohan'ny Ceni vaovao.
Accueil/Politika/CENI : Voafidy ho filoha vaovao Dama Andrianarisedo Retaf Arsène
Lucien R. 7 décembre 2021
Andriamatoa Dama Andrianarisedo Retaf Arsène no voafidin’ireo mpikambana sivy mirahalahy mandrafitra ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana ankehitriny, ho Filoha indray hitantana ity CENI ity mandritra ny fe-potoana enin-taona voafaritry ny lalàna. Izany no nivoitra nandritra ny fivoriana naharitra telo andro, taorian’ny fianianana izay natao ny 01 Desambra 2021 lasa teo. Tsara tsiahivina fa Andriamatoa Dama Andrianarisedo Retaf Arsène dia mpikambana notendren’ny Filohan’ny Repoblika. Andriamatoa Andriamalazaray Andoniaina, avy amin’ny fiarahamonim-pirenena miorina ara-dalàna ary miantsehatra ao anatin’ny fanaraha-maso ny fifidianana kosa, no Filoha lefitra voalohany. Andriamatoa Houssene Abdallah, avy amin’ny Antenimieram-pirenena no lasa filoha lefitra faharoa. Filoha lefitra fahatelo kosa Razafimamonjy Laza Rabary, izay avy amin’ny Antenimierandoholona.
Andriamatoa Andriamarotafikatohanambahoaka Ralaisoavamanjaka no voafidy ho Mpampaka-teny voalohany, raha toa ka Andriamatoa Randrianarivonantoanina Tiana Ifanomezantsoa kosa no mpampaka-teny faharoa. Samy eo amin’ny toeran’ny mpanolontsaina kosa Andriamatoa isany Jeannot Guy Georges Razafindraibe, avy amin’ny holafitry ny Mpisolovava, Ravalitera Jacques Michaël, avy amin’ny fiarahamonim-pirenena miorina ara-dalàna ary miantsehatra ao anatin’ny fanaraha-maso ny fifidianana, ary Fidimiafy Roger Marc, izay avy amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana.
Nandritra ny fandraisam-pitenenany voalohany, nanome toky ny Filohan’ny Ceni vaovao, fa hanao ny asa ao anatin’ny fahaleovantena sy ny fahaiza-manao, ary anatin’ny mangarahara tanteraka. Isan’ny asa miandry voalohany ato anatin’ny fohy ezaka amin’izao fotoana ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana (RALE), izay efa nanomboka ny 01 Desambra 2021 lasa teo, ary tsy hifarana raha tsy any amin’ny volana Mey amin’ny taona 2022. Nanambarana ireto mpikamban’ny Ceni vaovao ireto fa tsy misy olana ny fiatrehana izany RALE izany satria ny ekipa rehetra efa niasa teo anivon’ny Ceni dia teo hatrany, fa ny birao maharitry fotsiny ihany no niova, ka tsy tokony ho sakana tsy hirosoan’ny asa izany.
LAHARAN’NY KANDIDA LOHOLONA: Vita ny fisarihana, hanomboka ny 19 Novambra ny fampielezan-kevitra
FIFIDIANANA LOHOLONA: Kihon-dalana lehibe ho an’ny Firenena ny vaton’ny mpifidy vaventy anio